अरुभन्दा किन महत्वपूर्ण बन्नेछ अक्सफोर्डको कोरोना खोप ? – eKhabarpati
५ महिनामा १०१ विदेशी देश निकाला
कार्की ब्यांक्वेटमा ओली समूहले राख्यो कार्यकर्ता भेला
सुदूरपश्चिममा नेकपाको अ‌ंकगणित : प्रचण्ड-नेपाल पक्षको पल्लाभारी
के संसद भंग चीनका लागि ‘सेटब्याक’ हो
अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने नेकपाको निर्णय निर्वाचन आयोगमा
अब प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद बैठकमा जान मिल्दैन : राधेश्याम अधिकारी
अध्यादेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
५५५५ जनाको परीक्षण गर्दा ७३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण
तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?आज २०७७ मंसिर ३० गते मंगलबारको राशिफल
जाडोमा धेरैबेर हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? साबधान ! ख्याल गर्नोस् नत्र जाला ज्यान
Home/समाचार/अरुभन्दा किन महत्वपूर्ण बन्नेछ अक्सफोर्डको कोरोना खोप ?
अरुभन्दा किन महत्वपूर्ण बन्नेछ अक्सफोर्डको कोरोना खोप ?
खबरपाटिNovember 30, 2020
१५ मंसिर, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोपको प्रतीक्षा विश्वभर छ ।
खोप आएपछि महामारी विस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने अपेक्षा छ । खोप विकास गरेका केही कम्पनीले खोप प्रभावकारी रहेको र अबको केही समयमा नै विश्व बजारमा आउने दाबी गरेका छन् ।
अहिलेसम्म फाइजर, मोडेर्ना र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले आफ्नो खोपको अन्तिम चरणको मानव परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । फाइजर र मोडेर्नाले विकास गरेको खोपले ९५ प्रतिशत संक्रमण रोक्ने दाबी गरिएको छ । तर, अक्सफोर्डले एक्स्ट्राजेनेका कम्पनीसँग मिलेर विकास गरेको खोप भने ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ ।
यद्यपि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका अनुसार परीक्षणका क्रममा खोपको डोजमा देखिएको समस्याका कारण प्रभावकारिता घटेको हो । डोज मिलाएपछि खोपको प्रभावकारिता ९० प्रतिशत छ । अरु खोपभन्दा कम प्रभावकारी देखिए पनि महामारी नियन्त्रणमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको खोप नै महत्वपूर्ण बन्न सक्ने अनुमान छ ।
यो खोपलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म दुई देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिन्छ । यसको मूल्य पनि अरुको तुलनामा सस्तो छ, एक डोजको मूल्य तीनदेखि चार डलरको बीचमा पर्नेछ ।
किन महत्वपूर्ण बन्न सक्छ ?
यो खोपको आवश्यक प्रविधि विश्वभरको महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने किसिमको छ । यो खोपलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म दुई देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिन्छ ।
तर मोडेर्नाको खोपलाई माइनस २९ डिग्रीको तापक्रम आवश्यक हुन्छ र केवल एक महिनासम्म मात्र राख्न सकिन्छ । बायोएनटेक कम्पनीसँग मिलेर फाइजरले बनाएको खोपको लागि भने माइनस ७५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक हुन्छ । उक्त तापक्रमबाट बाहिर निकालेको पाँच दिनभित्र यो खोपको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ ।
फाइजर र मोडेर्नाको खोप भण्डारणको लागि निकै चिसो तापक्रम आवश्यक हुन्छ, जुन धेरै स्थानमा सम्भव हुँदैन । यद्यपि एक्स्ट्राजेनेकाको खोप भने पुरानै संरचनामा भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै एक्स्ट्राजनेका, जोन्सन एण्ड जोन्सन र रुसी कम्पनीले निर्माण गरेको स्पुतनिक भी खोप एउटै प्रविधिमा आधारित खोप हुन्, जसले मानिसको शरीरले चिन्ने भाइरसमा कोरोना भाइरस राखेर शरीरभित्र पुर्‍याउँछन् र शरीरले त्यसैको आधारमा कोरोना भाइरसविरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता बनाउँछ ।
फाइजर र मोडेर्नाको खोपमा भने म्यासेन्जर आरएनए (एमआरएनए)को प्रयोग गरिएको छ, जसले शरीरभित्र गएर शरीरलाई नै कृत्रिम कोरोना भाइरस निर्माण गर्न सहयोग गर्छ र त्यसलाई परास्त गर्दै शरीरले कोरोना भाइरसविरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्छ । यो नौलो प्रविधि हो र यसरी निर्माण गरिएको प्रतिरोधी क्षमता कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा थाहा पाउन अझै पर्याप्त विवरणहरु उपलब्ध छैन ।
क्षमताको आधारमा पनि एक्स्ट्राजेनेकाको खोप महत्वपूर्ण बन्नसक्छ । यो कम्पनीले आगामी वर्ष विश्वभर तीन अर्ब डोज खोप वितरणको लक्ष्य लिएको छ । मोडेर्नाले ५० करोडदेखि एक अर्ब डोजसम्म लक्ष्य लिएको छ भने फाइजरले एक अर्ब ३० करोड डोजको लक्ष्य लिएको छ ।
विश्वभर कोरोना खोपको माग हुनुले विश्वभरका खोप निर्मातालाई अवसर भने प्रशस्त रहेको देखिन्छ । तर, एक्स्ट्राजेनेकाका प्रतिस्पर्धीले आफ्नो क्षमता बढाउन सकेनन् भने एक्स्ट्राजेनेका सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बन्ने देखिन्छ ।
३. सहयोगको वाचा
एक्स्ट्राजेनेकाले अहिलेसम्म ३० करोड डोज खोप कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई दिने वाचा गरेको छ । यो कार्यक्रममा भारतको सेरम इन्स्टिच्युट र किल एण्ड मेलिण्डा फाउण्डेसनले २० करोड डोज एक्स्ट्राजेनेका वा नोभाभ्याक्सको खोप प्रदान गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
मोडर्ना र फाइजरले भने यो कार्यक्रमका लागि कुनै वाचा गरेका छैनन् । त्यसैले पनि यो खोप कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै मुलुकमा पुग्नेछ, जसले विश्वभर महामारी अन्त्यको लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।
४. खोपको मूल्य
एक्स्ट्राजेनेकाले कम्तीमा सन् २०२१ को जुलाइसम्म यो खोपमा कुनै नाफा नलिने घोषणा गरिसकेको छ । विशेषगरी कमजोर आय भएका मुलुकले पनि खरिद गर्न सकून् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
एक्स्ट्राजेनेकाको खोप एक डोजको मूल्य तीनदेखि चार डलरको बीचमा पर्नेछ । तर, फाइजरको एक खोपको मूल्य करिब २० डलर पर्नेछ भने मोडेर्नाको खोपको मूल्य ३२ देखि ३७ डलरको बीचमा रहनेछ ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रवक्ता अहिलेको महामारी अन्त्य गर्न खोपले अनुमति पाउनासाथ अहिलेको संरचनाअनुसार विश्वभर नै खोपको आपूर्ति गरिने बताएको छ ।
५. विश्वव्यापी योजना
अहिले देखिएको खोप खरिदको सम्झौताहरुले धनी र गरीब मुलुकबीच खोप वितरणमा असमानता देखिने स्पष्ट भएको छ । केहीले धनी मुलुकहरुले पनि गरीब मुलुकहरुलाई पनि खोप सुनिश्चित हुने गरी सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले धनी मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकहरुका लागि खोप सुनिश्चित गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै देशमा कोरोना खोप पुर्‍याउन कोभ्यास कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो कार्यक्रमको लक्ष्य सन् २०२१ को अन्तिमसम्ममा दुई अर्ब डोज खोप वितरण गर्नु हो । यो संख्या कोभ्याक्स कार्यक्रममा सहभागी मुलुकहरुको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो ।
तर तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएका फाइजर, मोडेर्ना र फाइजरले भने खोपले सहयोगको वाचा गरेका छैनन् । यसरी हेर्दा कोभ्याक्स हालसम्म एक्स्ट्राजेनेकाको खोपकै भरमा छ ।
#अरुभन्दा किन महत्वपूर्ण बन्नेछ
तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? आज २०७७ साल मंसिर १५ गते सोमबारको राशिफल
घुससहित मालपाेतका नासु र कार्यालय सहयाेगी पक्राउ
पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्दैछ, लकडाउनबारे नसोचौं : वायुसेवा सञ्चालक संघ
अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव आज, नेपाली पनि ट्रम्प र वाइडेनको पक्षमा विभाजित
उपत्यकाका २४३ वटै प्रहरी युनिटमा मानवअधिकारबारे प्रशिक्षण
धर्म संस्कृति (70)